Ndepipi Inotengesa Vatengi paIndaneti Kutanga Rwendo Rwokutenga? Semalt Nyanzvi Inopa Kuongorora Kunokosha
Mutengi Wekutengesa Mubudirira we Semalt Digital Services, Frank Abagnale, anotsanangura kuti shopper iri paIndaneti inotanga kusunungura kupera kwekusagadzikana.
Muna 2016, shanduro yepamusoro yevatengi yakagadzirwa ne Power Power Review yakagadzika kuti yakawandavashandi vekutenga vanotanga kutsvaga chimwe chinhu chavanoda pane zvose maAmazon neGoogle. Iyo yekupedzisira yakawana 35% yevatengi vose vaitsvaga neyekarekutora 38% chikamu. Saizvozvowo, 21% yevashambadziri vanosarudza kutanga kutsvaga kwavo mune zvekutengesa e-commerce website inosanganiswa nemamwe mabhuku - information technology consulting l.l.c.Kune rumwe rutivi, eBay inotakura 6% yeboka iri sevashambadziro avo vakasarudza. Zvakawanikwa zvakasimbisa mufaro mumusika, zvaveyakasunungurwa nekambani yakakurumbira inonyanya kukoshesa kuongororwa kunokosha, kuverenga uye mubvunzo-uye-mhinduro. Mharidzo yavo yakanyanya kuwanarubatsiro kubva kune vashandi ve-e-commerce vakadai sevatengesi vedigidhi.